Mudaharaad looga soo horjeedo joogitaanka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaano - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMudaharaad looga soo horjeedo joogitaanka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaano
Mudaharaad looga soo horjeedo joogitaanka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaano
May 28, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Mudaharaad looga soo horjeedo joogitaanka Somaliland oo ka dhacay magaalada Laascaano. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Boqolaal qof ayaa ka qeybgalay mudaharaad ka dhacay magaalada Laascaano ee gobolka Sool, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland ee PL TV.
Mudaharadayaasha ayaa sheegay in aysan taageersanayn maamulka Somaliland, aysana dooneyn in ay Soomaaliya ka go’aan.
“Anagu waxaan nahay Soomaali, oo weligayo ahaanaynaa, kama go’ayno Soomaali, Somaliland ma taageesani ma nihin mana noqon doono,” ayuu yiri mid kamid ah banaanbaxayaasha.
Banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale sheegay in ay katirsanyihiin dowladda Puntland, iyaga oo taageeray gulufka Puntland ay ku dooneyso in ay maamulka Somaliland uga xoreyso gobolkaas.
“Shacabkayagu waxa weeye Puntland, waxaanu nahay Soomaaliya, Somaliland afduub bay nagu heysataa, xoog bay nagu heystaan, ma dooneyno ma rabno.” Mid kale oo banaanbaxayaasha kamid ah ayaa sidaa yiri.
Mudaharaadkan ayaa yimid kadib markii asbuucii lasoo dhaafay maamulka Somaliland ay soo saareen go’aano ay ku caburinayaan shacabka Laascaano, iyaga oo mamnuucay in wax shirar ah iyo mudaharaad lagu qabto gudaha magaalada.
Asbuucyadii lasoo dhaafay, ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa ku dagaalamayay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Dowladda hadda jirta ee Puntland ayaa sheegtay in ay dib u soo celin doonto deegaanada dastuuriga ah ee Puntland oo ay heysato Somaliland.
April 30, 2018 In ka badan 100 askari oo Somaliland katirsan oo isku soo dhiibay Puntland
May 20, 2018 Ciidamada Puntland oo Wasiirka Gaashaandhiga maamulka Somaliland u diiday in uu tago magaalada Baran
August 20, 2018 Kornayl Caare oo bilaabay dhaqdhaqaaq jabhadeed oo ka dhan ah maamulka Somaliland
Puntland oo sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq
At least 2 killed in Somaliland’s murderous assault on civilians in Lasanod town
Guddoomiyihii hore ee maxkamada sare Puntland Yuusuf Xaaji Nuur oo aas qaran oo loogu sameeyay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee maxkamada sare ee dowladda Puntland Yuusuf Xaaji Nuur ayaa maanta oo Jimce ah lagu aasay qabuuro kuyaala duleedka magaalada Garoowe, kadib aas qaran oo loo sameeyay. Aaska qaran ayaa waxaa [...]
Washington-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa iska bixisay lacaga deynta ah oo ku lahaa Bankiga Adduunka, taasoo u suurtagelinaysa in ay lacag ka amaahato deyn bixiyaha markii ugu horeysay muddo soddon sanno ah. Soomaaliya ayaa dib [...]
Madaxweynaha dowladda Puntland oo kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee dalka Norway
Oslo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa xalay oo Arbaco ahayd kulan la qaatay jaaliyada Puntland ee ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway. Madaxweyne Cabdiweli ayaa jaaliyada uga waramay xaaladaha ka jira [...]